Ogige ndị njem nleta nke Cox's Bazar nyere iwu ka emechibidoro n'etiti mgbasa ozi COVID
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Bangladesh njem ozi ọma » Ogige ndị njem nleta nke Cox's Bazar nyere iwu ka emechibidoro n'etiti mgbasa ozi COVID
Ogige ndị njem nleta nke Cox's Bazar
Gọọmentị mpaghara mpaghara Cox's Bazar nyere iwu ka emechie ebe niile ndị njem nlegharị anya na obodo osimiri n'akụkụ ọhụụ ọhụrụ nke ọrịa coronavirus na Bangladesh niile.
N’ọnwa Febụwarị, ndị njem bịara n’otu ụsọ osimiri Cox’s Bazar, ndị ọnụ ọgụgụ COVID-19 dị ala rata.
Kemgbe ahụ, e nweela ịrị elu na ikpe coronavirus na obodo Bangladesh.
Iwu ọhụrụ enyego iwu ka ndị njem nleta niile gaa ebe ndị njem nleta gụnyere osimiri ga-emechi ruo Eprel 14.
Ogige ndị njem nleta nke Cox's Bazar dị na obodo a na ndịda ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri nke Bangladesh ma mara ya dị ka ebe ndị njem nleta nwere oke osimiri nwere oke aja na-agbatị site na Sea Beach dị n'ebe ugwu ruo Kolatoli Beach na ndịda.
Deputy Commissioner Md Mamunur Rashid kwuputara njem ahụ iji mechie ebe nlegharị anya niile Cox's Bazar na ọkwa mere gburugburu 8:45 mgbede ụnyaahụ, Tọzdee, Eprel 1, 2021. Osote onye isi ọrụ ahụ kwuru na ndị njem nleta na-ahụ maka njem na-ezigara ndị nchịkwa mpaghara ntuziaka mgbede ụnyaahụ na-esochi nlọghachi nke ọrịa coronavirus na mba ahụ.
Emechiri ebe ndị njem Cox's Bazar na etiti ọnwa Machị afọ gara aga mgbe nchọpụta nke ikpe mbụ. Gọọmentị nyere iwu ka ụlọ ọrụ niile, gụnyere ndị uwe ojii na-eme njem nleta, mee ihe dịka iwu ahụ si dị.
Ntụziaka ahụ nyere iwu imechi ebe niile ndị njem nleta dị na Cox's Bazar ruo Eprel 14. Na mbụ, ụlọ oriri na nkwari akụ niile ga-emechi, mana Mamunur mechara gosi na ha ga-enwe ike idobe ndị ọbịa na ọkara ikike.
A naghị ekwe ka ndị njem gaa n'ụsọ osimiri ka ndị ọchịchị mechiri ya na azụmahịa ndị metụtara njem, dị ka mgbazinye ụgbọ mmiri jet, kwuru Mohammad Mohiuddin Ahmed, onye ọzọ na-elekọta ndị uwe ojii.
Naanị ọnwa Febụwarị gara aga, Cox's Bazar nabatara ihe ruru otu nde ndị njem na ngwụsị izu nke atọ nke ọnwa karịa ihe karịrị ụlọ nkwari akụ na ebe ntụrụndụ 400 ka edebarala akwụkwọ na ụgbọ elu ụgbọ elu na ụgbọ ala. Ọbụna tiketi niile maka ụgbọ mmiri ndị njem ụgbọ mmiri nke Saint Martin na-erekwa.
Na mgbakwunye na ebe ndị njem nlegharị anya dịka Laboni, Inani, Himchhori na ndị ọzọ, mpaghara dị iche iche na mpaghara mpaghara dị n'ụsọ osimiri dịka Saint Martin's Island, Dulahazra Safari Park, Radiant Fish World na ọtụtụ ndị ọzọ na-atụ anya nnukwu njegharị nke ndị njem nwere nnukwu nsogbu okporo ụzọ na mmụba nke ọnụahịa nke ihe ndị dị mkpa.
Nke a ịrị elu na njem nleta ọrụ na Bangladesh obodo ahụ bụ n'ihi eziokwu ahụ na n'oge ahụ ọ na-ahụ ọdịda nke ọnụ ọgụgụ kwa ụbọchị COVID-19 na ọnwụ.